सहमतिपछि समाजबादी-राजपाबीच कहिले हुदैछ एकता घोषणा ? यस्तो भने इस्तियाक राई – Sanghiya Online
सहमतिपछि समाजबादी-राजपाबीच कहिले हुदैछ एकता घोषणा ? यस्तो भने इस्तियाक राई
Posted on : July 13, 2019 - No Comment
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीचको पार्टी एकता वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समाजवादी र राजपाका शीर्षनेता पार्टी एकताका लागि अन्तिम छलफलमा रहेका स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी एकताको छलफलमा समाजवादी पार्टीबाट डा. भट्टराई, यादव र अर्का नेता अशोक राई तथा राजपाबाट ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् । दोस्रो तहका नेताहरु पनि निरन्तर छलफलमा रहेका स्रोतले जनाएको छ ।
समाजवादी पार्टीका नेता एवं शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तेयाक राईले दुवै पक्षबीच पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको बताएका छन् । नागरिकखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हामी दुवै पक्ष पार्टी एकताको अन्तिम छलफलकै क्रममा छौँ । छिट्टै एकता गर्ने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ । सैद्धान्तिक कुरा मिलिसकेका छन् ।’
मिल्न बाँकी विषय के ?
समाजवादी र राजपाबीचको पार्टी एकता नेतृत्वको मोडल तथा नेताहरुको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ । एकल वा सामुहिक नेतृत्व, केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या, जिम्मेवारी बाँडफाटलगायतका विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ । तर समाजवादी पार्टीले भने पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो हुनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
तराई मधेसमा राजपाभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा स्थापित भएकाले समाजवादी पार्टीबाट मुल नेतृत्व हुनुपर्ने तर्क समाजवादी पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् । तर राजपा नेपालका नेताहरुले भने सामुहिक नेतृत्व अर्थात् धेरै अध्यक्ष बनाउने गरी पार्टी एकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
समाजवादी पार्टीका नेता राईले भने पार्टी एकताको सैद्धान्तिक छलफल टुंगिएकाले अहिले नेताहरुको व्यवस्थापन, नेतृत्वको मोडललगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । उनले मिल्न बाँकी विषयहरु पनि चाँडै मिल्ने र छिट्टै पार्टी एकताको चरणमा प्रवेश गर्ने बताए ।
नेकपा हाइकमाण्डलाइ सचेत हुन् आफनै नेता कार्यकर्ताको चेतावनी, पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी
सिंगो देश आक्रान्त भयो, स्वास्थ्यमन्त्री यादवको तत्काल राजीनामा माग गर्दछु- सांसद गौतम
भरतपुर घटनालाई लिएर निर्वाचन आयोग ‘एक्सन’, चाल्यो यस्तो कदम
भद्रगोल नेकपा, एकतापछि बसेन केन्द्रिय समिति बैठक, विधानको धज्जी उडाउदै, के छ विधानमा?
प्रदेश न.२ आफ्नो शासन आफनै प्रशासनमा अगाडी लम्कियो, ओली सरकारलाई जोडदार झटका
राजपाको बार्षिक उत्सबकै दिन उपाध्यक्षसहित ३३ केन्द्रिय सदस्यले गरे नया पार्टी घोषणा
पूर्व माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्रको नेतृत्वमा दर्जन वढि नेता-कार्यकर्ता समाजवादीमा प्रवेश
बाढी-पहिरोमा परेर मर्नेको सङ्ख्या ४३ पुग्यो २० घाइते, हरेक बर्ष झैँ सरकार निर्देशन मै ब्यस्त